Crypto News 18.10.2018 - Blockchain News
EyeDwarha 18, 2018 admin
ngoku inkampani uyadika uElon must kaThixo yamkela Bitcoin
UElon must ingene ngokusemthethweni ihlabathi cryptocurrency, ne qalisa usomashishini osakhasayo ngoku Inkampani Bukruqule ukwamkela Bitcoin, Litecoin nabanye. yasekwa ngonyaka ka- 2016, mission Inkampani uyadika kukuba ukuphelisa kwezithuthi kwizixeko ezikhulu ngokudala web yonke imigudu komhlaba ukuba ukunika indlela entsha ukuhamba ngokukhawuleza ukusuka kwindawo enye ukuya kwenye.
Ngenxa inkampani yokwakha itonela yayo yokuqala uvavanyo e Los Angeles, Must wagqiba ukuthengisa umgca izinto ezizodwa yokukhuthaza elona linge, kuquka iminqwazi kwaye ngoku-edume "Hayi-A-Flamethrower." umgca Le nkampani ngayo iimveliso ezinxulumene-umlilo singazuzwa Bitcoin & Litecoin, njengoko kuphawulwe kwi website ye nkampani.
inkampani Ukhuseleko G4S uqala inkonzo lokukhulisa crypto
UK inkampani iinkonzo zokhuseleko esekelwe G4S ngoku inikezela ngenkonzo crypto ilungelo ejoliswe ukukhusela abazalisi’ zorhwebo impahla digital. Le nkampani ithe, kunye ukuthandwa ekuphumeni cryptocurrencies, Kwathi inkonzo entsha ukuze banikele “-Yokhuseleko oluluqilima yokugcina offline ukuba inceda ukukhusela iiasethi zezikrelemnqa imigewu.”
Dominic MacIver, ingozi umhlaziyi oluphezulu G4S uthe “isisombululo sethu zokhuseleko yakhelwe phezu kwesiseko 'yokugcina isiqulathi'. Thina nje kuphela ukuthatha ii-asethi intanethi, nesuka nawaphula banyuka amaqhekeza ukuba ngokuzimeleyo ngaphandle ixabiso uze uwugcine ngokunqabisekileyo ezindaweni yethu yokhuseleko oluluqilima, ingafumaneki izaphuli-intanethi kunye abaphangi ngokufanayo.”
Mt Gox Bitcoin abatyalwayo baye 4 iintsuku ezininzi ukuba bangenise izicelo zamabango entlawulo
Izigulana ze exchange elide-nongasebenziyo crypto Mt. Gox kufuneka afake naziphi na amabango imali abanjwe Okt. 22makabuyele 2018. Exchange kuqala bavula inkqubo amabango Agasti, kulandela ungonakala idabi. Ababolekisi ukuba ifayile ndayeyisa nemfuyo yabo cryptocurrency, kunokuba elilingana eyake esekelwe amaxabiso cryptocurrency ngo 2014. Emva kokuba umhla Oktobha 22 kudlula, Mt. Gox trustee Nobuaki Kobayashi uye 3 iinyanga ukuze ufake ingxelo sokuvunywa okanye ukwaliwa.
Ngokwe ngxelo ecacisa inkqubo yesiqhelo civil:
“Ngalo mzuzu, siceba ukuba ningamkeli yokufayilisha oluthile cryptocurrencies ngaphandle bitcoins. kunokuba, siceba ukuba lithe bitcoin abatyalwayo abaye bafaka ubungqina ibango bitcoins kwakhona bafaka ubungqina amabango kwezinye cryptocurrencies kwimvu ukuba inani bitcoins bafaka. Siya ukuthumela iinkcukacha ezithe vetshe eneenkcukacha kule website.”
Indian exchange Top Zebpay eshenxela ku Malta emva kwamabutho yebhanki engundoqo
Le cryptocurrency ngqwabalala kwemozulu esemthethweni Indiya kujike kube isipho kuba ezizibiza kwisiqithi blockchain saseMalta, njengomnye phantsi konxibelelwano cryptocurrency ukuba kutshanje ivalwe phantsi kwilizwe yehlabathi 2 kunezizwana ugqibe ukuya imisebenzi apho. Zebpay, enye konxibelelwano ezinkulu in India, ukuvota iofisi Malta ngenjongo yokukhonza abemi nje kunye nabahlali yesizwe siqithi kodwa 20 namazwe abahlali kunye abemi abafanelekileyo ukufikelela kwiinkonzo zayo cryptocurrency exchange.
e Malta, Zebpay iye yafakwa phantsi kwegama Awlencan. Exchange waqhubeka karhulumente: "Le ekunciphiseni kwi-akhawunti zebhanki kuye usisiqhwala yethu, nomthengi yethu, ukukwazi transact ishishini ephumelelayo… Kule ndawo, asikwazi ukufumana indlela efanelekileyo ukuze aqhube ishishini cryptocurrency Exchange na. "Zebpay ngoMay 3 kwiminyaka eyadlulayo yaye uyiqwebe 3 abasebenzisi yesigidi amakhulu amawaka abasebenzisi abatsha ukujoyina nyanga nganye ngaphambi ngumkhenkce logcino central yebhanki-Indiya.
US bekumele ukuba kwintengiso $ 4m e Bitcoin ngenyanga ezayo
Bamashali US ubhengeze isicwangciso Ukuthengiswa umgama $4 million Bitcoin kwinyanga ezayo. I-bid kwemikhombe uphawu ngenxa 660 Bitcoin ukuba zihlalo esizi federal, amatyala embambano neyolawulo. Imiselwe ukuba uqale ngo Nov. 5th, ifandesi ifuna bacinga bidders ukuba lifake $200,000 emva kokubhalisa yesazisi lwabo arhente engadlulanga Okt .31st.
I-arhente wabonisa ezinye yempahla kwentengiso ziquka bitcoin ithinjwe kwiimeko eziliqela kutshanje ezifana amatyala urhulumente US nxamnye Abarhwebi bitcoin Theresa Tetley kunye Thomas Mario Costanzo - bobabini wagwetywa entolongweni ngezityholo Bitcoin imali ngokungekho semthethweni. Ifandesi ezicwangcisiweyo iza kwiinyanga nje emva kokuba bekumele US wathengisa phezu 2,100 Bitcoin no 3,600 Bitcoin in March noJanuwari, ngokulandelana, imali engama ukuya ngaphezu $50 million ngexesha.
“Bitcoin Growth WILL BE IMMENS...
Investing - Marijuana Penny St...
Twitter NEW: vo NESTOKHWE, ...
Hey Daily Team Altcoin, Ekuqaleni ...
What Is The Future Of Cryptocu...
Hey Daily Team Altcoin! In th...
Only 1% Bitcoin Volume from Ch...
COMMENT ON SEC BITCOIN ETF APP...
Blockchain.io - Bitcoin & ...
Digibyte Rebrand - Too Little ...
Digibyte, an old favourite, bu...
Post Previous:Blockchain News 17.10.2018
Post Next:Crypto News 19.10.2018
World’s Largest Bank Eyes Blockchain, NULS, Bancor, Digibyte – Namhlanje Crypto News
Looking Beyond Bitcoin’s ETF, SALT Lending, Bittrex – Namhlanje Crypto News
EyoKwindla 19, 2019
EyoKwindla 18, 2019